चौध महिनादेखि रोकिएको कोरिया रोजगारी पुन सुरु गर्न पहल – Korea Pati
चौध महिनादेखि रोकिएको कोरिया रोजगारी पुन सुरु गर्न पहल
July 2, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on चौध महिनादेखि रोकिएको कोरिया रोजगारी पुन सुरु गर्न पहल
चौध महिनादेखि रोकिएको कोरिया रोजगारी पुन सुरु गर्न पहल थालिएको छ। रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका कामदार कोरोना म’हामा’रीका २०७६ फागुनदेखि कोरिया जान पाएका छैनन।
सुरुमा नेपालले कोरिया पठाउन चासो दिएको थिएन भने पछिल्लो समयमा कोरिया सरकारले नेपाली कामदार लैजान चासो देखाएको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले रोकिएको रोजगारी सुचारु गर्न कोरियाले केही सर्त अघि सारेर छलफल सुरु भएको बताए।
‘बन्द रोजगारी सुचारु गर्नुपर्ने हाम्रो निरन्तरको प्रयासअनुरूप कोरियाबाट चासो हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘कोरियाले राखेको सर्तबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि रोजगारीका लागि कोरिया जाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’ कोरियाले नेपाली श्रमिक लैजान नेपालबाट सिधैं कोरिया उडान हुनुपर्ने, त्यहाँ पुगेर कोरोना बिमा गर्नु पर्ने र कोरिया पुगेपछि श्रमिक निजी खर्चमा क्वा’रेन्टिन बस्नुपर्ने स’र्त राखेको छ। ‘यी स’र्त पूरा भएमा श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कोरियाले पत्राचार गरेको छ,’ दवाडीले भने।
रोकिएको रोजगारी सुचारु गर्न सर्त राखे पनि कोरिया सकारात्मक देखिएकाले चाँडै सुरु हुने विभागका अधिकारीहरूले अपेक्षा गरेका छन्। सरकारले गत साता दक्षिण कोरियामा पनि नियमित उडान सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि निर्णय कार्यान्वयनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालय पनि रोकिएका कामदारलाई चाँडोभन्दा चाँडो कोरिया पठाउने पक्षमा रहेकाले कोरियाको सर्तमा फटाफट निर्णय हुने धेरैको अपेक्षा छ।
कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि उड्न नपाएका युवायुवतीले रोजगारी सुरु गर्न पटकपटक द’बाबमूलक अभियान चलाउँदै आएका छन्। पारिश्रमिक र बसोबासको दृष्टिकोणले कोरिया रोजगारी आकर्षक मानिन्छ। कोरिया रोजगारीमा जानेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक साढे एक लाख रूपैयाँ हुन्छ भने धेरैलाई अतिरिक्त समयमा काम गर्ने सुविधा हुने हुँदा मासिक पारिश्रमिक तीन लाख रूपैयाँसम्म पुग्ने बताइन्छ।
कोरोना महामारीका कारण भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब सात हजार र बिदामा घर आएका करिब तीन हजार कोरिया जान पाएका छैनन्। कोरोना म’हामा’रीअघिसम्म भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्ष र रोजगारदाताले बोलाएको ६ महिनाभित्र कोरिया गइसक्नुपर्ने नि’यम भएकाले यतिखेर कोरिया उड्न नपाएकाहरू निकै तनावमा छन्।
म’हामा’रीकै बेला कोरियाले नेपाल बाहेकका केही मुलुकबाट श्रमिक आपूर्ति गर्न थालेपछि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका युवालाई झनै चि’न्तामा थपेको छ। सरकारले नेपाली कामदार लैजान अव’रोध सिर्जना गरे पनि रोजगारदाताले अन्य मुलुकबाट आपूर्ति गर्दा नेपाली युवा कोरिया जान व’ञ्चित हुने त्रा’समा रहँदै आएका छन्। (नागरिक न्युजमा प्रकाशित समाचार)
कोरियाको आकर्षक तलब छोडेर नेपालमा कालिज पाल्दै एक यूवक,भन्छन जागिर गर्नुभन्दा आफ्नो व्यबसाय गर्दा खुशी छु !
कोरियामा भिषा निती परिवर्तन हुँदै, E9 कामदार पनि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने !
दक्षिण कोरिया-अमेरिकाले तत्काल सैन्य अभ्यास नगर्ने